★IZINDLU EKHONA★ (3 BHK Pool Villa) - I-Airbnb
★IZINDLU EKHONA★ (3 BHK Pool Villa)
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-7 Mirror BNB
U-7 Mirror BNB unokuphawula okungu-530 kwezinye izindawo.
U-7 Mirror BNB uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
ICorner House iyindawo engu-500 sq yd emgwaqeni wasePatrakar, eMansarovar (cishe ama-500mts ngaphakathi ukusuka kumgwaqo omkhulu we-sanganer). Indlu ifakwe zonke izinsiza ezifana ne-wi-fi, indawo yokubhukuda, itafula le-pool, ingadi eluhlaza okwesibhakabhaka, amasimu avulekile.
Uzothanda yonke into mayelana nendawo. Impahla izungezwe i-nursery namapulazi. Umoya ohlanzekile nohlanzekile, ngenxa yendawo ezungezile eluhlaza
Kusekhaya kude nekhaya elinomoya ojabulisayo, imininingwane eklanyelwe ukunethezeka kwesimanje kanye nokusetshenziswa komdwebi wezakhiwo. Inenani elanele lokukhanya kwelanga phakathi nosuku futhi inomoya omuhle. Iphuma nekhishi elihlome ngokuphelele elihlanganisa zonke izidingo ezibalulekile njengebanga lokupheka, i-microwave nehhavini, ifriji, isihlanzi samanzi se-R.O nazo zonke izitsha nezinto zokusika ezinezithako eziyisisekelo. Kukhona ne-WIFI esheshayo, i-smart TV, Imidlalo, Izincwadi ezitholakalayo ukuze zifinyeleleke noma nini.
Wonke amagumbi okulala nezindawo ezivamile ane-air conditioning futhi aklanyelwe ukuhambisana nokunethezeka kwakho ngezinsiza zesimanje. Amanzi ashisayo atholakala ubusuku nemini, amalineni ahlanzekile nahlanzekile namathawula anikezwa umatilasi onethezekile.
ICorner House izungezwe izindlu zamapulazi ezizimele. Isibhedlela sitholakala ku-300 mts ukusuka endaweni.
Izitolo ezisetshenziswayo kanye nezitolo zokudla nazo ziyatholakala ebangeni elihambayo.
Indawo yendawo ayikude neze ku-400 mts ukusuka emgwaqeni omkhulu.
Ibungazwe ngu-7 Mirror BNB
Sitholakala nganoma yisiphi isikhathi ngocingo, i-imeyili noma ku-whatsaap kunoma yimuphi umbuzo wakho. Samukela zonke izihambeli kodwa uma singatholakali ngaleso sikhathi umnakekeli wethu u-Akhilesh uzokwamukela futhi anikeze isingeniso esifushane mayelana nendawo futhi akusize nganoma yiziphi izidingo zakho phakathi nesikhathi sakho sonke sokuhlala kwakho.
Umnakekeli uhlala endaweni ngalo lonke usizo oludingayo nokwenza ukuhlala kwakho kunethezekile.
Sitholakala nganoma yisiphi isikhathi ngocingo, i-imeyili noma ku-whatsaap kunoma yimuphi umbuzo wakho. Samukela zonke izihambeli kodwa uma singatholakali ngaleso sikhathi umnakeke…